Nke a bụ otu esi bulie Blog gị maka ire ahịa ọdịnaya | Martech Zone
Nke a bụ otu esi bulie Blog gị maka ire ahịa ọdịnaya
Thursday, July 24, 2014 Kelsey Cox
N'agbanyeghị ụdị ọdịnaya ị na-eke, blọọgụ gị kwesịrị ịbụ ebe etiti maka ire ahịa ọdịnaya niile. Mana olee otu ị ga - esi jide n'aka na etinyere sistemu ụjọ maka ihe ịga nke ọma? Na ihu ọma, enwere ụfọdụ tweaks ndị ga - eme ka nkesa dịkwuo elu ma hụ na ndị na - eso ụzọ gị maara ihe ha kwesịrị ime ọzọ.
Ọ dị mma ikwu taa na ndị mmadụ na-enwe mmasị na foto. N'ezie, otu isiokwu nwere onyonyo karịrị 2x nwere ike ịkekọrịta karịa otu isiokwu na-enweghị ya. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị na blọgụ gị, ọ ga-abụ na ọ ga-ekekọrịta. Gbalisie ike na itinye akara nkenke mmekọrịta gị kacha dị mkpa na mbido akwụkwọ ọ bụla, ị ga - ahụkwa 7x ọzọ.
Na ntuziaka a na-ahụ anya n'okpuru, Nkebi nke ise na Onboardly kọwaa ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga-esi jide n'aka na blọọgụ gị kachasị nke ọma ma dịkwa njikere maka ndị ọbịa, ịkekọrịta yana mgbanwe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ọwa kachasị nkesa maka ọdịnaya gị, otu esi ebuli ọwa ọ bụla maka nsonaazụ kacha, nweta ntinye mgbasa ozi ma tụọ ROI - ị nwere ike ibudata Ntuziaka kachasị maka nkesa ọdịnaya.
Ka anyị mara ihe ọzọ ị na-eme iji dọta ndị na-agụ gị blog n'okpuru na ihe.
Tags: blogcontent MarketingctainfographicmarketingnjikarịchaROIAelekọta mmadụ mediankwado mmadụ
Plọ ahịa gị ntụpọ: A Mobile Deals App Wuru maka Consumer
Zụlite Ntughari site na Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha
Aug 6, 2014 na 3: 21 AM
Ndewo, a na m eke blog na wordpress na isiokwu a na-enyere m aka ebuli ya. Ihe kariri ọdịnaya ihe omuma ihe omuma na akowa otutu. Ugbu a ka m doro anya banyere otu blọọgụ kwesịrị isi lee anya. Daalụ maka post.
Aug 26, 2014 na 8: 08 AM
Mana ọdịnaya kwesịrị metụtara blọọgụ aka nri ma ọ bụrụ na ejikọtaghị ya enwere ike iji nweta okporo ụzọ na-adịghị mkpa.
Ọkt 14, 2014 na 1:27 AM
ekele maka isiokwu… ekwenyere m na post a nyere m aka ịkwalite blọọgụ m